Facebook Lite 161.0.0.2.117 Android အတွက် Aptoide APK အား ဒေါင်းလုပ် ပြုလုပ်ပါ
ဗားရှင်း 161.0.0.2.117 လွန်ခဲ့သော2ရက်က
Problems with downloading or installing the app? See https:www.facebook.comhelpfblite
Still need help? Please tell us more about the issue: https:www.facebook.comhelpcontact640732869364975
Terms of Service: http:m.facebook.comterms.php
app ကိုဒေါငျးလုပျသို့မဟုတျ install လုပျပါပွဿနာ? https:www.facebook.comhelpfblite ကိုကွညျ့ပါ
သို့တိုငျအကူအညီလိုအပျ? ကိုပွဿနာအကွောငျးပိုမိုပွောပွပေးပါ: https:www.facebook.comhelpcontact640732869364975
Service ၏စညျးမဉျြးမြား: http:m.facebook.comterms.php
Facebook Lite အတွက် အသုံးပြုသူ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ
Facebook Lite အပေါ် ပြန်လည်စစ်ဆေးမှုများ
mark8 စတိုး 1.13M 551.82M
APK ဗားရှင်း 161.0.0.2.117